Sida loo edit maktabadda Lugood
1.1 Manager Lugood Library
1.2 midowdo Maktabadaha Lugood
1.3 nadiifi Lugood Library
1.4 Delete Lugood Library
1.5 Edit Lugood Library
1.6 Fix Lugood Library
1.7 Dib u celi Lugood Library
1.8 Share Lugood Library
1.9 Refresh Lugood Library
2.0 Rescan Lugood Library
2.1 saar waxyaabaha nuqul
2.2 Lugood Music Library
2.3 Maktabadaha Multiple Lugood
2.1 Transfer Lugood Library
2.2 nidaameed Lugood Library
Goobta 2.3 Lugood Library
3 kaabta & Soo Celinta
3.1 kaabta Lugood Library
3.2 Soo Celinta Lugood Library
3.3 In la tayeeyo Lugood Library
3.4 Ladnaansho Lugood Library
Sida loo Edit Lugood Library
Faalladaada ku lug leh hawsha kala duwan oo loo samayn karaa inta badan tafatirka waa in loo gudbiyaa sida bedelayaan laakiin waxa ay sidoo kale ku lug leedahay arrimaha sida koobiyeynta, ururinayaan iyo takhalusid.
Waxaa jira siyaabo badan oo ka mid ah door bidaan karaa in xaalkaa maktabadaha ay Lugood. Waxaa jira habka si toos ah iyo buuga. In habka buuga user shakhsi baadhaa files in la saxar ah ka dibna waxay khusaysaa qaabka uu doonayo. Wixii automatic user isticmaalo software oo awood isaga u xaalkaa uu playlist.
Edit gacanta maktabadda Lugood
Dooro Lugood ka your computer, Lugood waxaa lagu taageeray ka versions computer ka duwan tan ku xirnaan doontaa Creech in waxaa looga baahan yahay intii lagu rakibo. Ka dib markii ay suuqa kala Lugood, dooro magac song in aad rabto in aad beddesho ah. Xaqa guji song ka dibna dooro "magac track" tani waxay muujin doonaa faahfaahinta song in aad rabto in aad beddesho ah, waxaad dooran kartaa in la beddelo ama u tago. Ka dib codsanaya qaabka aad rabto in aad xulan OK hoose ee suuqa kala.
Faalladaada faylasha ayaa sidoo kale waxaa la samayn karaa oo ay ururinayaan files music in ay si hufan u. Inta lagu guda jiro ururinayaan waxaa ku lug tirka tus iyo ku biirin files la xiriira. Waxaa jira siyaabo kala duwan in qof gaynaysa laakiin habka fudud waa:
Suuqa kala Lugood Open
Dooro file iyo menu jiido hoos ah ayay u muuqan doonaan
Dooro ikhtiyaarka maktabadda iyo menu yar muuqan doonaa. Dooranaysaa xoojin maktabadda.
Markaasuu ku dhameysan
Edit maktabadda Lugood fudud oo si toos ah ula Gurtida Go
Wondershare TunesGo waa codsi ah in ay tahay in ay awoodaan in ay wax ka bedel ama si fudud u maraan Lugood si toos ah loo isticmaalo qalabka. Ma ahan codsiga lacag la'aan ah waxay u baahan tahay in la iibsaday ku dhiirigelinayaan in uu. Waxay bixiyaan version tijaabo ah oo loo isticmaali karaa muddo waqti go'an ka dib markii taas oo ka codsan doona diiwaan gelinta si ay u isticmaalaan. Isticmaalka weyn ee TunesGo waa in ay bixiyaan xal isku dhafan kuwaas oo caawin doona in ay maareeyaan music digital hab ku haboon.
Tafatirka la TunesGo waa hab fudud oo farxad leh tan iyo markii uusan qofku u baahan tahay si ay u qabtaan shaqo badan. Waxaa jira qaababka badan oo la imanaysa marka la codsiga ku saabsan tafatirka; mid si fudud magaca karo, nuqul in qalab kale oo ay soo jiitaa sii jeedi habka ridida ama tirto faylasha nuqul ama baabbi'iyeen. Marka ay dhacdo in files halaagnay hore mid isku dayi kartaa dib u dhiska faylasha.
Talaabooyinka ay tahay in la raaco inta lagu guda jiro tafatirka marka la isticmaalayo TunesGo waa wax yar ka sahlan tan ku dhowaad hawsha oo dhan waxaa loo sameeyaa by codsiga.
Wadaagista isticmaalaya TunesGo, dooro song in aad rabto in aad la wadaagto ka soo playlist ah.
Edit song ka playlist ka dibna aad u wadaagi karaan warbaahinta bulshada sida Facebook iyo Twitter
Koobiyeynta faylasha la TunesGo
Koobiyeynta faylasha ka Lugood in qalab waa mid fudud oo isticmaalaya TunesGo. Kala iibsiga music Select ka page kala iibsiga music ka dibna dooro music ka Lugood aad markaas jiidi oo hoos u qalabka. Dadka in ay jecelyihiin in ay wax ka bedel ay gacanta weli fursad u haysataa tan iyo TunesGo ma xaddido habka tafatirka si ay u shaqayso sida codsiga dhexjir ah.
Raadi sida ugu wanaagsan ee kaabta Lugood Library Your
Sida loo Nadaafadda Music Library
Sida loo Tranfer Lugood Apps in Android
Wax walba waa in aad ogaato oo ku saabsan Lugood U iyo Lugood U u Android
Waa maxay Maktabadda Lugood ah?
Top 10 Scripts Lugood u Lugood
Sida loo beddel maqaarka Lugood ah
> Resource > Lugood > Sida loo edit Lugood Library